वि.सं २०७९ जेठ ८ आइतबार
अर्जुन अधिकारी काठमाडाैं
२०७८ माघ ९ आइतबार ०६:१९:००
अर्जुन अधिकारी, काठमाडाैं
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मृतक सबै दीर्घरोगी, १३ जना खोप नलगाएका
ओमिक्रोन भेटियन्ट भित्रिएसँगै कोरोनाको तेस्रो छाल सुरु भएको २२औँ दिनमा एकैदिन १६ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारको तुलनामा चार गुणाले बढेर शनिबार १६ संक्रमितको मृत्यु भएको हो । केही महिनायता दैनिक औसत मृत्युदर तीनजना मात्रै रहेकोमा शुक्रबार चारजनाको मृत्यु भएको थियो ।
शनिबारको मृत्यु संख्या चार महिनायताकै सर्वाधिक हो । यसअघि गत २ असोजमा १६ संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । त्यतिवेला डेल्टा भेरियन्ट फैलिएको थियो । पुसमा ओमिक्रोन भित्रिँदा पनि डेल्टा भेटियन्ट भने निख्रिएको थिएन । एस जिन सिक्वेन्सिङ नगराएका कारण दुवै भेरियन्टको संक्रमण छ या ओमिक्रोन मात्रै भन्ने निश्चित छैन । त्यसैले कुन भेरियन्टले मृत्यु भएको भन्नेमा सरकार नै अनभिज्ञ छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कुन भेरियन्टले मृत्यु भएको भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘शनिबार एकैदिन १६ संक्रमितको मृत्यु भयो, तर कुन भेरियन्टले मृत्यु भएको भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसरी छुट्याउन जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन गर्ने गरिएको छैन,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मृतक सबै दीर्घरोगी हुन् । उनीहरूमध्ये तीनजनाले मात्रै कोरोनाविरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको र १३ जनाले एक डोज पनि नलगाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए । तेस्रो छाल भित्रिएपछि शनिबारसम्म मृत्यु हुने ५० मध्ये ४३ जनाले खोप नलगाएको पनि उनको भनाइ छ ।
‘१६ पुसयता २२ दिनमा ५० संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । यीमध्ये सातजनाले मात्रै कोरोनाविरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका थिए । बाँकी ४३ जनाले कुनै मात्रा पनि लगाएका थिएनन्,’ डा. अधिकारीले भने, ‘मृत्यु भएकाहरू मिर्गौला, क्यान्सर र सुगरका दीर्घरोगी थिए ।’
शनिबार १० हजार दुई सय ५४ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । २० हजार एक सय ८७ नमुना परीक्षणमा ५०.८ प्रतिशतको पजिटिभ रिपोर्ट आएको हो । योसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या ७२ हजार आठ सय ६२ पुगेको छ ।
ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका डा. विमल शर्मा चालिसे अहिले संक्रमितको संख्या तीव्र बढे पनि अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था कमैलाई भएको नाममा लापरबाही बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । भाइरसले जुनसुकै वेला पनि भयावह रूप लिन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
‘संक्रमण तीव्र भए पनि स्वास्थ्य समस्या खासै देखिएन भनेर मापदण्ड पालना नगर्ने बढेका छन् । सामाजिक दूरी कायम नराख्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने काम भएको छ । चिन्ताको विषय नै यही हो,’ उनले भने, ‘भाइरसले जुनकुनै वेला आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेर भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ ।’
भारतमा कोरोना बढ्न थालेपछि नेपालमा जिन सिक्वेन्सिङ प्राथमिकतामा
कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध
अमेरिकामा कोरोनाका कारण अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्दै
कोरोना महामारीका कारण एसियाली खेलकुद स्थगित
मधेस प्रदेश कोरोनामुक्त, ८२ प्रतिशतले लगाए पूर्ण खोप
भारत र चीनमा फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण
कसले जिते, कसले हारे ?
बुढीगण्डकीदेखि पोखरासम्मका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
धनगढी उपमहानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालको जित सुनिश्चित
भरतपुर महानगरपालिकामा रेनु ५१६७ मतसहित अग्रस्थानमा, एमालेको पकडमा रेनुलाई पपुलर मत
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे
किन खुल्दैनन् ताजमहलका २२ कोठा ?
सिंगल थिएटर सकिँदै, मलमा मल्टिप्लेक्स हल
अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी : युगान्डालाई ३–२ को शृंखला
भरतपुर महानगरमा ७,४६५ मतले रेनु दाहाल अगाडि
कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय